डबलिन दृश्यहरू उत्कृष्ट स्थानहरूबाट हेर्दै
युरोप आयरल्याण्ड डबलिन
डबलिनको सर्वश्रेष्ठ लुकआउटहरू
by बर्नेड बिज
डब्लुल्लिनको सर्वोत्तम नजरले तपाईंलाई आयरल्याण्डको राजधानीको झलक दिइरहेको छ कि, धेरै अवस्थामा, तपाईं राम्रो तरिकाले पर्यटक पर्यटकको पछाडि हुनेछैन। अधिकांशले एक साटो यात्रा र एक साटो हिँड्ने समावेश गर्दछ। त्यसैले, यदि तपाईं आफ्नो खुट्टा खिच्न चाहनुहुन्छ र डबलिनलाई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ, यहाँ जानुहुन्छ।
डबलिन फ्लाइलिनमा हेर्दै हेर्दै
डबलिनको सबैभन्दा उत्कृष्ट झिल्लीहरू आयरिश राजधानीमा उडान गर्ने विमानबाट उडान हुन सक्दथे, आयरिश मौसमसँग खेलिने निर्णय गरे र तपाइँ बादल र कुनामार्फत तल घटाउनुहुन्न। र यो सबै उडानमा पनि पर्दछ।
धेरै विमानहरू हर्थको उत्तरतिर आइरेरिया सागरमा आउँछन्। तपाईं यस मामला मा ह्यान्ड, डबलिन बे, Wicklow पर्वत र डबलिन शहर को बायाँ-हात खिडकियों बाट एक राम्रो दृश्य हुनेछ।
अर्को मुख्य उडान मार्ग तपाईंलाई मेथमा पुग्छ, पश्चिमबाट डबलिनको नजिक पुग्छ। निश्चित रूपले कम रोमाञ्चक छ, तर तपाईंले भर्खरै शहरको झलक देखाउनुहुनेछ।
डबलिन को दृश्य को लागि स्लो नाव ले
डेभ जी केली / Getty Images
नौकाले डबलिनको पासो पनि निकै रोमाञ्चक छ, यद्यपि छिटो घाट अवलोकन गर्दा डेकमा केहि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तथापि, तीव्र घाटहरू, प्रायः अझै पनि एक खुला "sundeck" माथि उच्च छ र यहाँ देखि दृश्य राम्रो हुन सक्छ।
डबलिन खाडीको यात्रा गर्दा तपाइँ डन लाघियर, श्वेत लोफ माउन्ट, र (अक्सर प्रायः) Wicklows पोर्ट (बाँया), हाउथ र बुल आइल्याण्डमा तारा चिन्ह (दाहिने) को देख्न सक्नुहुन्छ। डबिंग गर्दा डब्लुल्लिन डकल्याकल्याण्ड र बाहिर शहर को एक महान दृश्य पनि छ।
डन लाउरीयर हार्बर र डब्लुएचिन बे दक्षिण बाट
टिम ग्राहम / गेट छविहरू
जब डन लाघियरमा छिटो नौका सर्वोत्तम विचारहरू प्रदान गर्दैन, डन लाघियर हार्बर आफैं ठूलो छ। तपाईं पियरहरूमा (कहिलेकाहीं ब्रेकिंग अनुभव) हिँड्न सक्नुहुन्छ र डन लाघियर र डबलिन खाडीको दृश्यको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ, 40 फुट स्नान र पूर्वतिर जयस टवर, ह्याट बस र समुद्र तटमा र अन्तमा डबलिन उत्तर पश्चिम। ध्यान दिनुहोस् कि पूर्वी पियर ट्राफिकको लागि उत्तम छ, तर वेस्ट पियरमा अधिक थोरै हिडले प्रकाशको राम्रो दृश्य प्रदान गर्दछ। यो सामान्यतया कम भीड हुन्छ।
ट्रेनद्वारा : डार्ट ले डन लाघेयर स्टेशनलाई पूर्वी पियरको लागि लिनुहोस् सल्टलल र मोनस्स्टाउन स्टेशनको वेस्ट पियरको लागि।
डबलिन बस द्वारा: शहर सेन्टर देखि 46 ए ले डन लाघियर सम्म।
कारद्वारा: डन लाघियर र नौकाको लागि संकेतहरूको पालना गर्नुहोस्।
हर्थको हिल (उत्तरबाट डबलिन बे)
डेभीड सोन्ने फोटोग्राफी / गेट छविहरू
हर्थ हार्बर केहि राम्रो विचारहरू छन् तर हर्थको हिलमा "शिखर सम्मेलन" मा दोस्रो फिल प्ले गर्दछ। यहाँ तपाई डबलिन खाडी डन लाघियर र Wicklow पर्वत तिर हेर्छु, डबलिन शहरका भागहरू हेर्नुहोस् र तल बेली लाइटहाउसको नाटकीय दृश्यको आनन्द लिनुहोस् ("तल" अपरेटिङ र सतर्क शब्द)। हाउथ क्लिफ वाल्क एक महान विचार हो, तर त्यहाँ सीधा ड्रपहरू सिधा समुद्र (वा चट्टानहरूमा) छन्, त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
रेलमार्फत: डार्टलाई हर्थमा लिनुहोस्, त्यसपछि एबे स्ट्रीट र थोरमान्बी रोडको शिखरमा जानुहोस्।
डबलिन बस द्वारा: 31 ले तपाईंलाई शिखर सम्मेलनको अधिकार पाउनेछ।
कारद्वारा: R105 ले हर्थको दिशामा राख्नुहोस्, सटन क्रसमा दायाँतिर ग्रीनफिल्ड रोडमा घुम्नुहोस् र जब सम्म तपाईं शिखर सम्म पुग्नुहुनेछ।
बाहिर Poolbeg लाइटहाउस (एक डाइभिन डबलिन खाडीमा)
वास्तवमा पानीमा हिंड्ने निकटतम, डबलिन बेको बीचमा एक लामो समुद्र पर्खालको अन्तमा स्थित पूलबेग लाइटहाउसमा टहलिएको छ, सबै चारैतिर राम्रो विचार छ। डाउनइड्स (हरू): तपाईं कम मैदानमा हुनुहुन्छ (र तपाईं वास्तवमा समुद्र स्तरमा यो देख्न सक्नुहुन्न), तपाइँ हवाहरू द्वारा बफर गर्दै हुनुहुन्छ र हिड्दा पुरानो पत्थरों मा थोडा ब्वाइबल हुन सक्छ। तर एक अनुभव निश्चित रूपमा आनन्दित हुन्थ्यो।
रेलद्वारा: DART ले ग्रैंड क्यानल डक वा Lansdowne रोडमा लिनुहोस्, त्यसपछि एक लामो पैदल यात्रा (एक नक्शा ल्याउनुहोस्)।
डबलिन बस: बस नम्बर 1 ले तपाइँले तालबीब पावर स्टेसनमा लिनुहुनेछ, समुद्री पर्खाल स्टेशनको पूर्व सुरु हुन्छ।
कारद्वारा: Poolbeg पावर स्टेसनमा ड्राइभ गर्नुहोस् र यसको पछि एक सुविधाजनक पार्किङ पत्ता लगाउनुहोस्।
फीनिक्स पार्क, लिफ्ट माथि उच्च
अधिकांश मानिसहरू फीनिक्स पार्कमा पोप क्रसको भ्रमण गर्छन् र Wicklow माउन्टहरूको झलकको आनन्द लिन्छन्, तर यदि तपाईले केही साढे हिड्नको लागि अप्ठ्यारोमा रहेको पत्रिकाले फोर्ट टाउकोलाई लिफ्ईमा राख्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाई वास्तवमा नदी घाटीमा हेर्न सक्नुहुन्छ र युद्ध मेमोरियल गार्डन हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्याक्सिक्स पार्कका अन्य ठाउँहरूको रूपमा म्यागजिन किट सजिलै संग गाडीमा पहुँच योग्य छैन, तपाईं यहाँ यहाँ अझ बढी शान्ति पाउनुहुनेछ।
रेलमार्फत: LUAS लाई संग्रहालय वा हेस्टन स्टेसनमा राख्नुहोस् (एक उपनगर र इन्टरसीटी टर्मिनस) र फीनिक्स पार्कमा जानुहोस्, त्यसपछि संकेतहरू पछ्याउनुहोस्।
डबलिन बस: रूट 10 वा 31 (अन्य) बीचमा तपाइँ पार्क प्रवेशमा पुग्नुहुनेछ।
कार द्वारा: चेस्टरफिल्ड एवेन्यू ले वेलिंगटन रोड ले किला सम्म ले या चैपलेलिज गेट को माध्यम ले दर्ज गर्नुहोस र घुमावदार सैन्य रोड ले लो।
हिल्सको लागि चलाउनुहोस्: डबलिन हेर्दै Wicklow पर्वतहरूबाट
पीटर जेले छविहरू / गेट छविहरू
जब तपाईं ग्लेन्सिडी मार्फत Wicklow माउन्टमा सडक बाहिर जानुहुन्छ लगभग सबै डबलिन को एक शानदार दृश्य भेट्टाउन सकिन्छ। बस जहाँ R115 तीव्र घुमाउरो र दाँया तिर लाग्नु हुन्छ, तपाइँ दाँयामा कुनै पनि असीमित अनिनो कार पार्कलाई ध्यान दिनुहुनेछ। यहाँ मा खींच्नुहोस् (हेरचाह गर्नुहोस्, कहिलेकाहीं क्षेत्रको बोतलबिरी काट्ने ठाउँ र टाढा-अनुकूल छैन), त्यसपछि तपाईको बाटो बनाउनुहोस् (फेरि ट्र्याकिङ ट्राफिक हेरचाह गर्ने) एक दृष्टिकोणमा जुन बेवास्ता र बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। तैपनि, रूखहरू र शरबहरू कहिलेकाहीँ पछाडी तिरस्कार गरिन्छ र माथिबाट दृश्यले तपाईंलाई डबलिन सिटीको एक महान परिदृश्य प्रदान गर्दछ।
कार द्वारा: सैली ग्याप को लागि नेतृत्व, R115 ले लो।
गिनीस स्टोरहाउस: सजिलो विकल्प एक पोन्ट सहित
रिचर्ड आईएनन्सन / गेट छविहरू
त्यसैले तपाईं वास्तवमा ड्राइभ गर्न चाहनुहुन्न, बस लिनुहोस्, हिंड्नुहोस्? खैर, डबलिनमा बसोबास, गिनीस स्टोर हाउसको लागि र गुरुत्वाकर्षण पट्टी सम्म। छरितो मा दृश्य को आनंद ले कालो सामान को एक पिंट माथि। बस चेतावनी दिनुहोस् ... माथि नाम गरिएको सबै अन्य दृष्टिकोणहरूको विपरीत, योसँग एक मूल्य ट्याग छ!
ट्रेनद्वारा : नजिकैको LUAS स्टेशन संग्रहालय र हेस्टन स्टेसन हुनेछ।
डबलिन बस द्वारा: साउथ क्वेजका सबै बसहरू ब्रेकरी पास गर्छन्। त्यसो त धेरै भ्रमण गर्ने बसहरू।
कारद्वारा: केन्द्रीय डबलिनमा कार प्रयोग नगर्नुहोस्।
डबलिनमा तपाईंको यात्राको अधिकांश बनाउनुहोस्
डबलिनबाट लिनुहोस्7दिनको यात्रा
सेन्ट पैट्रिक कैथेड्रल
डबलिन मा रयल नहर मार्ग
जीपीओ गवाह इतिहास - ईस्टर राइजिङको मनोरञ्जन
बोस्टनमा एक बरसात दिवसमा5कुरा गर्न को लागी
बांगङ्गा टैंक फोटो टूर: प्राचीन हिडन मुम्बई भित्र
आँखाको आकार लिने
चार्टर ओक लीजेंड: कनेक्टिकटको आधिकारिक राज्य ट्री
पार्किङ डाउन रेनोमा पार्किंग
तालाहासीमा समलैंगिक स्थलहरू
मनसास वाइन र ज्याज फेस्टिवल 2017
यो जंगली मा सांप हेर्न विश्व को सर्वश्रेष्ठ स्थान हो
पतन घटनाक्रम, त्यस्ता उत्सवहरू र टेक्सासमा गतिविधिहरू
लिटिल रक अर्कान्सस मा पभिलियन किराया
क्रिसमस ओल्ड स्ट्रिब्रिज गाँउ: क्रिसमस टूर
डाउनटाउन अस्टिनको वरिपरि
फिलीपींस Cordilleras चावल छर्रों को अन्वेषण
तपाईले तपाईंको अवकाश कटेजमा ल्याउनु पर्छ